खेलकुद « Gaunbeshi
एनआरएनए लाइब्रेरी हस्तान्तरण पछी बिद्यालयका प्रधानाध्यापक भन्छन : लाइब्रेरी स्थापनाले सुनमा सुगन्ध थपिएको छ ।
डडेल्धुरा,असार २० । एनआरएनएले डडेल्धुराको पुइलेखमा रहेको बालकल्याण माद्यामिक बिद्यालमा एनआरएनए लाइब्रेरी हस्तान्तरण गरेको छ । एनआरएनए लाइब्रेरी बिभाग प्रमुख भक्त बहादुर भण्डारीले एक समारोह
शेर्पा पराजित भएसँगै प्रशिक्षक अल्मुताइरी समेत बिदा हुने सम्भावना
काठमाण्डौं,असार ७ । अखिल नेपाल फुटबल संघमा गणेश थापाको लामो समयको राज २२ वर्ष लामो युग समाप्त पार्दै अध्यक्ष बनेका कर्माछिरिङ शेर्पा पाँच वर्ष मात्र नेतृत्वमा टिक्न सके । उनलाई
१० वर्षदेखि बराबरी खेल्दै स्पेन र पोर्चुगल
एजेन्सी । ८ वर्षपछि राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएका रिकार्डो होर्टाले गोल गरेपछि पोर्चुगलले नेसन्स लिगको पहिलो खेलमा स्पेनसँग बराबरी खेलेको छ । यसअघि स्पेनका लागि खेलको २५ औँ मिनेटमा अल्भारो
फुटबलर जेरार्ड पिकेसँगको सम्बन्ध टुंग्याउँदै शाकिरा, आखिर किन ?
एजेन्सी । कोलम्बियाकी प्रख्यात पप गायिका शाकिराले आफ्ना पति तथा स्पेनका दिग्गज फुटबलर जेरार्ड पिकेसँगको सम्बन्धलाई टुंग्याउने भएकी छन् । पिकेको अर्की एक महिलासँग सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि
कार दुर्घटनामा अस्ट्रेलियाका क्रिकेटर साइमन्डको निधन
काठमाडौं, १ जेठ । अस्ट्रेलियाका पूर्वक्रिकेटर एन्ड्रियु साइमन्डसको कार दुर्घटनामा परि ४६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । अलराउन्डर साइमन्डसले सन् १९९८ देखी २००९ सम्म अस्ट्रेलियाबाट २६ टेस्ट, १९८ एक
आईपीएल : हैदरावादमाथि दिल्लीको जित, रोचक बन्यो प्लेअफ दौड
एजेन्सी । सनराईजर्स हैदरावादलाई २१ रनले हराउँदै इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी(२० क्रिकेट प्रतियोगितामा दिल्ली क्यापिटल्सले पाँचौ जित निकालेको छ । बिहीबार राति दिल्लीले दिएको २०८ रनको लक्ष्य पछ्याएको
नेपालले जिम्बाबे ‘ए’ लाई दियो १८२ रनको लक्ष्य
काठमाडौं, १८ वैशाख । जिम्बाबे ‘ए’ विरुद्धको टी( २० शृंखलाको पहिलो खेलमा नेपालले १८२ रनको लक्ष्य दिएको छ । कीर्तिपुरस्थित टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले
जिम्बाबेसँग खेल्न नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा, को को परे ?
काठमाडौं । जिम्बाबे ‘ए’ विरुद्धको एकदिवसीय शृंखलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ । शुक्रबार मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेले एकदिवसीय शृंखलाको लागि नेपाली टोलीको कप्तानी सन्दीप लामिछानेले
किन पन्जाबसँग सोचेजस्तो खेल्न सकेनन् धोनीले ? धोनीले कमाल नगरेपछि चेन्नई पन्जाबसँग पराजित
काठमाडौं । चेन्नई सुपर किङ्सलाई ११ रनले हराउदै इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी(२० क्रिकेट प्रतियोगितामा पन्जाब किङ्सले चौथो जित निकालेको छ ।मुम्बईमा सोमबार राति पन्जाबले दिएको १८८ रनको लक्ष्य पछ्याएको
जिम्बाबेसँग खेल्न नेपाली राष्ट्रिय टिमको घोषणा, को को परे ?
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले जिम्बाबे वि रु द्ध हुने एक दिवसीय र टी(२० खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेको छ । क्यानले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा